Vaovao - Ahoana no nanaovana ny tantana varavarana
Ny fahaterahan'ny tantana varavarana
Isaky ny manindry ny tahony varavarana ianao mba hanokafana ny varavarana, efa nieritreritra ve ianao hoe inona avy ireo dingana tsy maintsy lalovan'io tombo-kase io alohan'ny hisehoany eo anoloanao? Ao ambadiky ny tahon-baravarana tsotra dia misy ny ezaka mafy ataon'ny mpamorona sy ny fahaizan'ny mpanao asa tanana.
Ny fahaterahan'ny endrika tsirairay dia avy amin'ny aingam-panahin'ny mpamorona. Aorian'ny fandraisan'ny mpamorona ny aingam-panahy amin'izao fotoana izao dia avelany ao amin'ny sary hosodoko izany. Aorian'ny fanavaozana sy fanatsarana maro amin'ny antsipirihan'ny drafitra voalohany, dia hilalao prototype 3D isika mba hanombanana sy hanovana ny fahatsapan'ny tanana amin'ny tantana varavarana. Ny tantana varavarana tsara dia tsy maintsy manana endrika aesthetic fotsiny, fa koa mandinika ny tena fampiasana tanana amin'ny tànana, mba hahatonga ny famolavolana ho maha-olombelona kokoa.
Aorian'ny fanamafisana ny sary famolavolana farany, ny injeniera dia manao sary 3D mifototra amin'ny sary famolavolana ary ny tompon'ny lasitra dia manamarina ny antsipirihan'ny bobongolo, ary avy eo dia manomboka ny fivoaran'ny bobongolo. Avy eo rehefa tonga amin'ny dingana lasitra T1 trail, ny injeniera dia manatsara ny bobongolo araka ny santionany T1, ary avy eo dia manatanteraka ny bobongolo fitsapana T2. Avereno ireo dingana etsy ambony mandra-pahafeno ny fepetra takian'ny lasitra trail. Aorian'ny fanovana ny bobongolo dia manomboka ny famokarana lalana. Raha toa ka tsy misy olana ny famokarana lalana, dia azo ampiasaina amin'ny fomba ofisialy ny bobongolo.
Amin'ny fampiasana 3 # zinc firaka izay misy 0.042% varahina ho akora, dia miempo amin'ny mari-pana ambony ary manindry ao amin'ny lasitra, ary maty-fanariana amin'ny 160T ho 200T maty-fanariana milina ho an'ny 6s mba hahazoana mazava tsara sy avo hakitroky. die castings. Ny tahony varavarana dia tsy mora mivoaka amin'ny endriny mandritra ny fanodinana manaraka, ary azo hatsaraina koa ny faharetana mandritra ny fampiasana.
Aorian'ny fanodinana ny die castings dia hotanterahina ny dingan'ny polishing. Mba hanatsarana ny fahombiazan'ny polishing, ny YALIS dia mampiasa fampifangaroana mekanika mandeha ho azy sy manual polishing mba hiantohana ny fahombiazana sy ny kalitaon'ny polishing, satria ny kalitaon'ny polishing dia mamaritra ny kalitaon'ny electroplated layer.
Ny banga voapoizina dia halefa haingana ho an'ny electroplating mba hisorohana ny oxidation ny varavarana. Mba hanatsarana ny oxidation fanoherana sy ny famirapiratry ny varavarana tahony. Isaky ny tahony varavarana dia ho electroplated amin'ny 7-8 sosona ny electroplating amin'ny mari-pana ny 120 ℃ -130 ℃, ary ny kalitaon'ny fisafoana vavahady dia hohamafisina mba hisorohana ny manomboka blister vokatra, onja vokatra sy ny tsy endrika vokatra.
Aorian'ny fanodinana sosona dia miforona tanteraka ny tahon-baravarana iray, ary avy eo dia mandalo fanaraha-maso ny kalitaon'ny sosona sy ny fivorian'ny rafitra, avy eo dia fonosina sy aterina amin'ny mpanjifa an'arivony. Asa tanana tsy manam-paharoa ny tahony varavarana rehetra kitihinao amin'ny fiainanao andavanandro.
YALIS Desig dia mpanamboatra varavarana matihanina manana traikefa 10 taona mahery ary mampifandray ny R&D, ny famokarana ary ny varotra.
Fotoana fandefasana: May-08-2021